माथिल्लो तामाकोशीलाई सफलता : फागुनभित्र बिजुली बल्ने - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
माथिल्लो तामाकोशीलाई सफलता : फागुनभित्र बिजुली बल्ने
आवाज अनलाइन २ असार २०७६, सोमबार
दोलखा, असार २
बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सबैभन्दा कठिन मानिएको पेनस्टक पाइप जडानको काममा लामो समयको प्रयासपछि सफलता मिलेसँगै आयोजनाको कामले पुनः गति लिएको छ ।
झण्डै ५ महिनाको प्रयासपछि हिजो मध्यरात तल्लो भर्टिकल टनेलमा सफलतापूर्व पहिलो पेनस्टक पाइप राखिएसँगै आयोजनाको कामले गति लिएको हो । विभिन्न प्रयासका अतिरिक्त भर्टिकल टनेलमा पेनस्टक पाइप जडान गर्न नसकिएपछि आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको थियो ।
हिजो करिब ८ घण्टाको प्रयासमा तल्लो भर्टिकल टनेलमा पहिलो पेनस्टक पाइप सफलतापूर्वक राखिएको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । दिउँसो पौने ३ बजेबाट राख्न थालिएको पाइप राती करिब साँढे १० बजेमात्रै राखिसकिएको डा. न्यौपानेले बताए । पेनस्टक पाइप राख्ने क्रममा आयोजना प्रमुख दिनेशजंग राणका अतिरिक्त अपर तामाकोशी हाइड्रोपापवर लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङको समेत उपस्थिति थियो ।
यसअघि तल्लो भर्टिकल साफ्टमा पाइप झार्ने क्रममा क्रेन तथा रोपमा समस्या आएर काम राकिएको थियो । ३७३ मिटर गहिरो तल्लो भर्टिकल साफ्टमा ५ मिटर लम्बाइ, ३ दशमलब ६ मिटर व्यास र २८ टल तौलका ७४ वटा पेनस्टक पाइप राखिनेछ । त्यसैगरी ३१० मिटरको माथिल्लो भर्टिकल साफ्टमा सोही प्रकृतिका ६२ वटा पेनस्टक पाइपहरु रहनेछन् । पेनस्टक पाइप ढुवानीको काम सकिएको छ ।
तल्लो भर्टिकल साफ्टमा पेनस्टक पाइप जडान कार्यले निरन्तरता पाउने भए पनि माथिल्लो भर्टिकल साफ्टको काम सुरु हुन एक साता लाग्ने प्रवक्ता डा. न्यौपानेले जानकारी दिए । एउटा पेनस्टक पाइप जडान गरिसक्न एक साता लाग्ने उनको भनाइ छ ।
लट नं २ ठेकेदाले तल्लो पेनस्टक पाइप जडानको कार्य ढिलो गरेपछि ३७३ मिटरको तल्लो ठाडो सुरुङमा लट नम्वर ३ का ठेकेदार एन्ड्रिज हाइड्रोलाई सो कामको जिम्मा दिइएको थियो । माथिल्लो भर्टिकल साफ्टमा पाइप जडानको कार्य भने टेक्सम्याको रेल्वे इन्जिनियरिङले नै गरिरहेको छ ।
आयोजनाको बाँधस्थलको काम सम्पन्न भैसकेको छ भने मुख्य सुरुङमा कङक्रिटिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुरुङ मार्गमा ग्राउटिङको काम भैरकेको छ । विद्युतगृहको काम अन्तिम चरण पुगेको र प्रसारण लाइनको काम भैरहेको छ । समग्रमा आयोजनाको काम ९८ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भैसकेको छ ।
४५६ मेगावाट क्षमताकाे आयोजनाकाे सुरू लागत करिब ३५ अर्ब रहेकाेमा आयोजना ढिलाइका कारण लागत दाेब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएकाे छ ।
आयोजनाका प्रवक्ता डा. न्यौपानेका अनुसार अब कुनै व्यवधान नआए आगामी फागुनभित्र विजुली बल्नेछ ।
तस्विर सौजन्यः माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपाने र उपप्रबन्धक विमल गुरुङ